Keratoconus (မျက်ကြည်လွှာခုံးထွက်ခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Keratoconus (မျက်ကြည်လွှာခုံးထွက်ခြင်း)
Keratoconus (မျက်ကြည်လွှာခုံးထွက်ခြင်း) ကဘာလဲ။
မျက်လုံး၏ အရှေ့ဘက်မျက်နှာပြင်ရှိ စက်လုံးခြမ်းသဏ္ဍာန် အကြည်ရောင်အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့် မျက်ကြည်လွှာ ပါးလာ၍ ရှေ့သို့ချှွန်ပြီး စူထွက်လာခြင်းကိုခေါ်သည်။
ထိုသို့ချွန်ထွက်လာခြင်းကြောင့် အမြင်မှုန်ဝါးလာပြီး အလင်းရောင်စူးစူးကို မခံနိုင်ဘဲဖြစ်မည်။ မျက်ကြည်လွှာခုံးထွက်ခြင်းသည် အများအားဖြင့် မျက်စိနှစ်ဘက်လုံးတွင် ဖြစ်ပြီး အသက်၁၀နှစ်မှ ၂၅နှစ်အတွင်း စ၍ဖြစ်သည်။ ဆယ်နှစ် သို့မဟုတ် ထိုထက်ပိုကြာအောင် ဆက်ဖြစ်နေနိုင်သည်။
အစောပိုင်းအဆင့်တွင် မျက်မှန်၊ မျက်ကပ်မှန်တို့ဖြင့် အမြင်အာရုံကို ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် မျက်ကပ်မှန်အမာစား သို့မဟုတ် အခြားမှန်ဘီလူးများနှင့် ပြင်ဆင်ယူရသည်။ သည်ထက်အဆင့်မြင့်သွားလျှင် မျက်ကြည်လွှာအစားထိုးဖို့ လိုနိုင်သည်။
Keratoconus (မျက်ကြည်လွှာခုံးထွက်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
Keratoconus (မျက်ကြည်လွှာခုံးထွက်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အလင်းရောင်စူးစူးကို မခံနိုင်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ညဘက်ကားမောင်းလျှင် အခက်အခဲရှိနိုင်ခြင်း
မျက်မှန်ပါဝါ မကြာခဏ ပြောင်းရခြင်း
ရုတ်တရက် အမြင်အာရုံ နောက်ကျိလာခြင်း တို့ဖြစ်ပြီး ရောဂါအခြေအနေအရ ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်သည်။
မျက်လုံးမျက်နှာပြင်အခုံးမမှန်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သော အမြင်အာရုံအလျင်အမြန် ဆုတ်ယုတ်ခြင်း ဖြစ်လာပါက မျက်စိဆရာဝန်နှင့်ပြပါ။ ဆရာဝန်က ပုံမှန်အတိုင်း မျက်စိစမ်းသပ်ရင်း မျက်ကြည်လွှာခုံးထွက်မှု ရှိမရှိစစ်ဆေးပေးပါလိမ့်မယ်။ သင်သည် လေဆာနှင့် မျက်စိပါဝါဖျောက်သည့် ခွဲစိတ်မှုလုပ်ရန် စဉ်းစားထားပါက မပြုလုပ်မီ ဆရာဝန်က မျက်ကြည်လွှာခုံးထွက်မှု ရှိမရှိစစ်ဆေးပေးပါလိမ့်မယ်။
Keratoconus (မျက်ကြည်လွှာခုံးထွက်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
မျက်ကြည်လွှာစူမထွက်ဘဲ နေရာတကျရှိနေစေရန် ကော်လာဂျင်ကြိုးမျှင်ကလေးများက ထိန်းထားပေးသည်။ ထိုကြိုးမျှင်များလျော့လာပြီး မထိန်းနိုင်တော့သောအခါ မျက်ကြည်လွှာ ပိုခုံးထွက်လာသည်။
မျက်ကြည်လွှာအတွင်းရှိ အကာအကွယ်ပေးသည့် ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများ လျော့နည်းလာခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ကားများရှိ အိတ်ဇောပိုက်မှ ဓါတ်ငွေ့ထွက်သကဲ့သို့ မျက်ကြည်လွှာမှလည်း ပျက်စီးစေသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ထွက်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများက စွန့်ပစ်ပေးပြီး ကော်လာဂျင်ကြိုးမျှင်များကို ကာကွယ်ထားသည်။ ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများလျော့နည်းလာပါက ကော်လာဂျင်အားလျော့လာပြီး မျက်ကြည်လွှာစူထွက်လာသည်။
မျက်ကြည်လွှာခုံးထွက်ခြင်းသည် မျိုးရိုးလိုက်တတ်သည်။ ရောဂါရှိသူတွင် သားသမီးရှိပါက ကလေးအသက်၁၀နှစ်မှစပြီး မျက်စိစစ်ဆေးပေးသင့်သည်။ ဓါတ်မတည့်သည့်ရောဂါရှိသူများတွင် ပိုမြန်မြန်ဖြစ်တတ်သည်။ မျက်လုံးခဏခဏ ပွတ်နေရသောကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။
မျက်ကြည်လွှာခုံးထွက်ခြင်းသည် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင် စဖြစ်လေ့ရှိသော်လည်း ကလေးအရွယ်နှင့် အချိုပတွင် အသက်၃၀လောက်မှလည်း စဖြစ်နိုင်သည်။ အသက်၄၀နှင့် အထက်လူများတွင် ဖြစ်နိုင်ခြေနည်းသွားသည်။
မျက်လုံးပုံသဏ္ဍာန် ပြောင်းလဲမှုသည် မြန်မြန်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ သုံးလေးနှစ်လည်း ကြာနိုင်သည်။ ထိုပြောင်းလဲမှုကြောင့် အမြင်မှုန်ဝါးခြင်း၊ ညဘက်တွင် အလင်းရောင်ကွင်းများ အလင်းတန်းများ မြင်ခြင်းတို့ ဖြစ်မည်။
အချိန်မရွေး ပုံသဏ္ဍာန်မပြောင်းတော့ဘဲ ဖြစ်နိုင်ပြီး ဆယ်စုနှင့်ချီပြီး ဖြစ်နေသည်လည်းရှိတတ်သည်။ ဘယ်လို ဖြစ်မည်ကို ကြိုတင်ခန့်မှန်း မရပါ။ လူအများစုတွင် မျက်စိနှစ်ဘက်လုံးဖြစ်သွားလေ့ရှိပြီး ဖြစ်သည့်ပမာဏတော့ တစ်ဘက်နှင့်တစ်ဘက် အမြဲမတူနိုင်ပါ။ မျက်လုံးတစ်ဘက်တွင် အရင်ဖြစ်ပြီး ကျန်တစ်ဘက်က နောက်မှ လိုက်ဖြစ်လေ့ရှိသည်။
ရောဂါပြင်းထန်ပါက ဆွဲထားသော ကော်လာဂျင်ကြိုးမျှင်များတွင် အမာရွတ်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်နိုင်သည်။ မျက်ကြည်လွှာအနောက်ပိုင်းတွင် စုတ်ပြဲသွားပါက လအတန်ကြာအောင် ရောင်နေတတ်သည်။ ထို့နောက် မျက်ကြည်လွှာတွင် အမာရွတ်ကြီးကြီး ကျန်ခဲ့တတ်သည်။
ငါ့ဆီမှာ Keratoconus (မျက်ကြည်လွှာခုံးထွက်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
မျက်ကြည်လွှာခုံးထွက်ခြင်းဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
မိသားစုတွင် မျက်ကြည်လွှာခုံးထွက်သည့် ရာဇဝင်ရှိခြင်း
ရင်ကြပ်ရောဂါနှင့် retinitis pigmentosa, Down’s syndrome, Ehlers-Danlos syndrome, hay fever စသည့် ရောဂါများရှိခြင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါဖြစ်ပွားနိုင်ချေများမရှိခြင်းကြောင့် သင့်မှာ မျက်ကြည်လွှာခုံးထွက်ခြင်းမဖြစ်ဘူးလို့ ပြောလို့မရနိုင်ပါဘူး။ ဒီအချက်လက်များဟာမှီငြမ်းကြည့်ရှုဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင် ဆွေးနွေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Keratoconus (မျက်ကြည်လွှာခုံးထွက်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
မျက်ကြည်လွှာခုံးထွက်ကြောင်းသိရန် မျက်စိဆရာဝန်က သင်နှင့် သင့်မိသားစု ရောဂါရာဇဝင်ကို မေးပြီး မျက်စိကို စမ်းသပ်မည်။ မျက်ကြည်လွှာပုံသဏ္ဍာန်ကို အသေးစိတ်သိဖို့ အခြားစစ်ဆေးမှုများလည်း ပြုလုပ်မည်။
မျက်မှန်ပါဝါစမ်းခြင်း။ မျက်စိဆရာဝန်က အထူးကိရိယာကို သုံးပြီး အမြင်အာရုံကို စစ်ဆေးမည်။ မှန်ဘီလူးဝိုင်း အမျိုးမျိုးပါသော ကိရိယာမှတဆင့် ကြည့်စေပြီး အပြတ်သားဆုံးမြင်ရသော မှန်ဘီလူးအတွဲကို ရွေးချယ်ပေးမည်။ အချို့ဆရာဝန်များက လက်ကိုင်မှန်ပြောင်းကိရိယာလေးနှင့် သင့်မြင်လွှာကို ကြည့်လိမ့်မည်။
Slit lamp ဖြင့် စမ်းသပ်ခြင်း။ ဆရာဝန်က မျက်လုံး၏မျက်နှာပြင်ကို ဒေါင်လိုက် အလင်းတန်းနှင့် ထိုးပြီး ပါဝါနိမ့်သော မိုက်ခရိုစကုပ်ဖြင့် ကြည့်သည်။ မျက်ကြည်လွှာ၏ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အခြားပြဿနာများကိုပါ မြင်နိုင်သည်။ မျက်စိသူငယ်အိမ်ကျယ်စေသည့် မျက်စဉ်းခပ်ပြီး နောက်တစ်ခေါက် ထပ်ကြည့်လိမ့်မည်။ ထိုသို့ ကြည့်ခြင်းဖြင့် မျက်လုံး၏ အနောက်ဘက်ကို ပိုမြင်နိုင်သည်။
မျက်ကြည်လွှာတိုင်းတာခြင်း။ ဆရာဝန်က မျက်ကြည်လွှာပေါ်သို့ စက်ဝိုင်ပုံအလင်းရောင်ဖြင့် အလင်းပြန်စေပြီး ထင်နေသောပုံရိပ်ကို တိုင်းတာခြင်းဖြင့် မျက်ကြည်လွှာ၏ အခြေခံပုံသဏ္ဍာန်ကို သိနိုင်သည်။
ကွန်ပြူတာစနစ်ဖြင့် မျက်ကြည်လွှာကို ပုံဖော်ကြည့်ခြင်း။ အထူးဓါတ်ပုံစစ်ဆေးမှုများဖြစ်သည့် optical coherence tomography, corneal topography တို့သည် မျက်ကြည်လွှာ၏ ပုံရိပ်ကို မှတ်သားပြီး မျက်ကြည်လွှာမျက်နှာပြင်၏ အသေးစိတ်ပုံစံကို ထုတ်ပေးသည်။ မျက်ကြည်လွှာအထူအပါးကိုလည်း တိုင်းတာနိုင်သည်။
Keratoconus (မျက်ကြည်လွှာခုံးထွက်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ကုသမှုသည် ရောဂါအခြေအနေနှင့် ရောဂါဆိုးရွားသည့်အမြန်နှုန်းအပေါ် မူတည်သည်။
မပြင်းထန်မှ အသင့်အတင့် မျက်ကြည်လွှာခုံးထွက်ခြင်းကို မျက်မှန်၊ မျက်ကပ်မှန်တို့နှင့် ကုသနိုင်သည်။ အများစုတွင် မျက်ကြည်လွှာသည် နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ပုံစံကျသွားသည်။ ထိုအမျိုးအစားများတွင် ဆိုးရွားသည့် အမြင်အာရုံဆိုင်ရာ ပြဿနာများ ကြုံရဖွယ်မရှိ၍ ဆက်လက်ကုသရန် မလိုပါ။
အချို့ မျက်ကြည်လွှာအမာရွတ်ရှိသော၊ မျက်ကပ်မှန်တပ်ရခက်သောသူများတွင် ခွဲစိတ်ကုသရန် လိုနိုင်သည်။
မျက်မှန်၊မျက်ကပ်မှန်။ ရောဂါအစောပိုင်းတွင် အမြင်အာရုံ မှုန်ဝါးခြင်းကို ပြုပြင်ပေးနိုင်သည်။ သို့သော် မျက်ကြည်လွှာ ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလာသည်နှင့်အညီ မျက်မှန်ပါဝါ မကြာခဏလိုက်ပြောင်းရလေ့ရှိသည်။
မျက်ကပ်မှန်အမာ။ ရောဂါပိုဆိုးလာပါက သုံးရန်ဖြစ်သည်။ တပ်ကာစတွင် နေရခက်နိုင်သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် အသားကျသွားကာ ကြည်လင်ပြတ်သားသော အမြင်အာရုံကို ရရှိစေသည်။ သင့်မျက်ကြည်လွှာနှင့် အံဝင်ခွင်ကျတပ်ဆင်ရန် ပြုလုပ်ထားသော မျက်ကပ်မှန်အမျိုးအစား ဖြစ်သည်။
ထပ်ပိုးမျက်ကပ်မှန်။ မျက်ကပ်မှန်အမာကို တပ်ရအဆင်မပြေပါက မျက်ကပ်မှန်အပျော့ပေါ်တွင် အမာထပ်အုပ်ပြီး တပ်ရန် ဆရာဝန်က ညွှန်ကြားလိမ့်မည်။
နှစ်မျိုးစပ်မျက်ကပ်မှန်။ အလယ်ပိုင်းတွင်အမာဖြစ်ပြီး သက်သောင့်သက်သာဖြစ်စေရန် ဘေးပတ်လည်ကို အပျော့သားဖြင့် လုပ်ထားသော မျက်ကပ်မှန်ဖြစ်သည်။ မျက်ကပ်မှန်အမာနှင့် အဆင်မပြေနိုင်သူများသည် ဤအမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ကြသည်။
မျက်သားကပ်မှန်။ ရောဂါအဆင့်မြင့်လာ၍ အလွန်ပုံပျက်သော မျက်ကြည်လွှာများတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ပုံမှန်မျက်ကပ်မှန်များကဲ့သို့ မျက်ကြည်လွှာပေါ်တွင်သာ တင်မနေဘဲ မျက်ကြည်လွှာကို ထိမနေဘဲ မျက်လုံး၏အဖြူသားတစ်ခုလုံးကို ဖုံးအုပ်လိုက်သည်။
မျက်ကပ်မှန်အမာ သို့မဟုတ် မျက်သားကပ်မှန်များကို အတွေ့အကြုံရှိသည့် မျက်စိဆရာဝန်ကိုသာ တပ်ဆင်စေသင့်သည်။ ကောင်းစွာ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မဖြစ်ကိုလည်း ပုံမှန်သွားရောက် စစ်ဆေးသင့်သည်။ အံဝင်ခွင်ကျမဖြစ်သော မျက်ကပ်မှန်သည် မျက်ကြည်လွှာကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။
မျက်ကြည်လွှာတွင် အမာရွတ်ဖြစ်ခြင်း၊ အလွန်ပါးလွှာခြင်း၊ ပါဝါအမြင့်ဆုံး မျက်မှန်များနှင့်ပင် အမြင်အာရုံကောင်းမလာခြင်း၊ မျက်ကပ်မှန်မတပ်ဆင်နိုင်ခြင်းတို့တွင် ခွဲစိတ်ကုသရန် လိုအပ်နိုင်သည်။ ခုံးထွက်နေသည့်မျက်ကြည်လွှာတည်နေရာနှင့် ရောဂါပြင်းထန်မှုအပေါ် မူတည်ပြီး ခွဲစိတ်မှု အမျိုးမျိုးရှိသည်။
မျက်ကြည်လွှာအတွင်း ပစ္စည်းထည့်ခြင်း။ ဤခွဲစိတ်မှုတွင် ဆရာဝန်က သေးငယ်သော လခြမ်းကွေးသဏ္ဍာန် ပလက်စတစ်အကြည်ကလေးကို မျက်ကြည်လွှာထဲထည့်၍် ခုံးထွက်နေသော မျက်ကြည်လွှာကို ပြားစေပြီး မျက်ကြည်လွှာကို ထောက်ပံ့ပေးကာ အမြင်အာရုံကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်။
မျက်ကြည်လွှာအတွင်း ပစ္စည်းထည့်ခြင်းသည် ပုံမှန်မျက်ကြည်လွှာပုံသဏ္ဍာန်ကို ပြန်ရစေပြီး ရောဂါဆိုးရွားမှုကို နှေးစေကာ မျက်ကြည်လွှာအစားထိုးရန် လိုအပ်နိုင်ခြေကိုလည်း လျှော့ချပေးသည်။ မျက်ကပ်မှန်တပ်ရလည်း ပိုလွယ်စေသည်။ မျက်ကြည်လွှာထဲရှိ ပစ္စည်းလေးကို ပြန်ထုတ်၍ရသောကြောင့် ယာယီကုသမှုဟုလည်း ဆိုနိုင်သည်။
ထိုခွဲစိတ်မှုကြောင့် ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း၊ မျက်လုံးထိခိုက်မိခြင်း စသည့်အန္တရာယ်များလည်း ရှိနိုင်သည်။
မျက်ကြည်လွှာအစားထိုးခြင်း။ မျက်ကြည်လွှာတွင် အမာရွတ်ဖြစ်ခြင်း၊ အလွန်ပါးလွှာခြင်းတို့တွင် မျက်ကြည်လွှာအစားထိုးဖို့ လိုနိုင်သည်။
Lamellar keratoplasty တွင် မျက်ကြည်လွှာ၏ တစိတ်တပိုင်းကိုသာ အစားထိုးသည်။
Penetrating keratoplasty တွင် မျက်ကြည်လွှာတစ်ခုလုံး အစားထိုးသည်။ ဤခွဲစိတ်မှုတွင် ဆရာဝန်က သင့်မျက်ကြည်လွှာအလယ်ပိုင်းတစ်ခုလုံးကို ထုတ်ယူပြီး အလှူရှင်၏ မျက်ကြည်လွှာနှင့် အစားထိုးသည်။
Deep anterior lamellar keratoplasty တွင် မျက်ကြည်လွှာ၏ အတွင်းဘက်အနားသားကို ချန်ထားသည်။ မျက်ကြည်လွှာတစ်ခုလုံး အစားထိုးရာတွင်ဖြစ်တတ်သည့် အရေးကြီးသော မျက်ကြည်လွှာ၏ အတွင်းဘက်အနားသားကို ခုခံအားစနစ်၏ တန်ပြန်တိုက်ခိုက်မှုကို ကာကွယ်ရန် ဖြစ်သည်။
မျက်ကြည်လွှာ အစားထိုးပြီး ပြန်ကောင်းရန် တစ်နှစ်အထိ ကြာနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် အမြင်ကြည်လင်စေရန် မျက်ကပ်မှန်အမာများ တပ်ထားရလေ့ရှိသည်။ အမြင်အာရုံ အပြည့်အဝပြန်ရရန် အစားထိုးပြီး သုံးလေးနှစ်အထိ ကြာနိုင်သည်။
မျက်ကြည်လွှာခုံးထွက်ခြင်းအတွက် အစားထိုးကုသခြင်းသည် ယေဘူယျအားဖြင့် အလွန်အောင်မြင်လေ့ရှိသော်လည်း ခုခံအားစနစ်၏ တန်ပြန်တိုက်ခိုက်မှု၊ မျက်စိမှုန်ခြင်း၊ မျက်လုံးတွင်း အလင်းရောင်ဆုံမှတ်မပြတ်ခြင်း၊ မျက်ကပ်မှန်တပ်မရခြင်း၊ ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း စသော နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများလည်း ရှိနိုင်သည်။
မျက်ကြည်လွှာခုံးထွက်နေသည့် ရောဂါရှင်များအတွက် ကော်လာဂျင်ချိတ်ဆက်ခြင်း ကုထုံးမှာ အားရဖွယ်ရာဖြစ်သည်။ အထူးမျက်စဉ်းဆေးများနှင့် UVA အလင်းရောင်ကို အသုံးပြု၍ မျက်ကြည်လွှာတစ်သျှူးများကို အားဖြည့်ချိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဤကုသမှုသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် စမ်းသပ်ဆဲအဆင့်ဖြစ်ပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုနိုင်ရန် ထပ်မံလေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ရန်လိုသေးသည်။
Keratoconus. https://www.webmd.com/eye-health/eye-health-keratoconus#1. Accessed November 1, 2017
Keratoconus. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/keratoconus/diagnosis-treatment/drc-20351357. Accessed November 1, 2017